Dhaawacyada Kooxda Arsenal oo halkooda ka sii socda & Lucas Torreira oo isagoo biro ku boodaya ka baxay garoonka Fratton Park – Gool FM
Dhaawacyada Kooxda Arsenal oo halkooda ka sii socda & Lucas Torreira oo isagoo biro ku boodaya ka baxay garoonka Fratton Park
Haaruun March 3, 2020
(Yurub) 03 Mar 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xalay iska xaadirisay wareegga siddeed dhammaadka FA Cup-ka kaddib markii ay guul 2-0 ka soo heshay Portsmouth oo ay booqatay.
Laakiin guushaas si sahlan kuma soo qaaday oo waxa ay ku waayeen mid ka mid ah xiddigahooda waana Lucas Torreira oo ku dhaawacmay ciyaartaas garoonka laga dhexqaaday.
Dhaawacyada Kooxda Arsenal ayaa halkooda ka sii socda, iyadoo Lucas Torreira la soo duubay isagoo ka baxaya garoonka Fratton Park, markaasoo ay lugtu u duubnayd, isla markaana uu biro ku boodayey.
Waxaa Lucas Torreira uu dhaawacan kala kulmay markii ay isku dhaceen xiddiga naadiga Portsmouth ee dhaceen James Bolton, in cabaar ah markii garoonka dhexdiisa lagula tacaalayey, maadaana uu xanuun badan dareemayey ayaa ugu dambeyn garoonka laga dhexqaaday, waxaana lagu bedelay Dani Ceballos.
Markii kulanku uu soo dhammaaday, isla markaana xiddiga khadka dhexe ee Torreira uu garoonka ka baxayay ayaa la arkayey iyadoo lugta loo geliyey wax ka ilaaliaya inay dhulka taabato kuna boodayey labo birood.
Kooxda Arsenal ilaa haatan warbixin caafimaad kama ay soo saarin xaaladda dhaawac ee Torreira, laakiin macallinka naadiga ee Mikel Arteta ayaa kulankii xalay kaddib sheegay in laacibku uu xanuun badan dareemayay, isla markaana xaaladdiisa ay qiimayn doonaan maalmaha soo aaddan, ka hor inta aysan si dhab ah u ogaanin muddada uu garoomada ka maqnaan karo.
Kooxda Manchester City oo xaqiijisay inay la saxiixatay daafac reer Brazil ah
Arsenal oo dalab 52 milyan oo gini ah ka gudbinaysa xiddig ka tirsan Kooxda RB Leipzig